Sawirro: Shariif oo gaaray Jowhar kadibna qaatay shahaadada musharaxnimo - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Shariif oo gaaray Jowhar kadibna qaatay shahaadada musharaxnimo
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada Jowhar ee xarunta dowladda HirShabeelle, oo uu ka doontay kursi xildhibaan.
Qoraal kasoo baxay Shariif ayaa lagu xaqiijiyey inuu halkaas u tegay inuu u tartamo kursiga xildhibaan HOP146 ee beeshiisa saami qeybsiga ay u leedahay.
Shariif ayaa isla maanta Jowhar lagu guddoonsiiyey shahaadada murashaxnimo ee kursiga HOP146, waxaana la tartami doona musharax lagu magacaabo Shariif Abuukar Axmed, sida ay sheegeen guddiga doorashada HirShabeelle.
Kursiga HOP146 ayaa waxaa ka taagneyd dood badan oo beesha dhexdeeda ah, kadib markii ay isku qabteen cidda la siinayo, ayada oo uu u sharaxnaa wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur hase ahaatee markii danbe u tanaasulay Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed.
Heshiis dhex maray beesha, wasiir Cabdullaahi iyo Shariifka ayaa la isla gartay in Shariifka lagu sharfo maadaama uu u tartamayo xilka madaxweynaha Soomaaliya, si baarlamaanka gudahiisa ugu dhex qaraabto.
Shariifka ayaa ballan qaad la hubo u sameeyay wasiirka amniga oo doonayay in kursigaasi xasaanad ka dhigto, maadaama uu leeyahay ganacsi xooggan, waxaana loo balan qaaday in haddii uu guuleysto kursiga dib loogu celin doono, hadidi uu guuldareystana uu jagooyin kale uga raadin doono dowladda cusub.
Safarka Sheekh Shariif ayaa waxaa ka horeeyay ciidamo xooggan oo shalay gaaray Jowhar, kuwaasi oo intii ay sii socdeen wadada Jowhar iyo Balcad u dhaxeysa qarax miino kula kulmay, qaraxaasi oo askar aad u tiro badan kaga dhinteen, kuwo kalena kaga dhaawacmeen.
Ma cadda weli haddii xal laga gaaray doodad beeleyd ee ka taagneyd kursiga iyo in dhagaha laga fureystay qeyladooda.
Sheekh Shariif ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cad cad xilka madaxweynaha Soomaaliya, ayada oo la rumeysan yahay inuu yahay musharax ay dhinacyo badan wada aqbali karaan haddii uu wareegga ugu dambeeya doorashada gaaro.